Le nkonzo online free. Ukubalwa ingca liqengqiwe
Ukubalwa ingca liqengqiwe
isikali umzobo 1: 0.5 1 2 3 4 5 6 8 10
Ubude esiqwengeni Y
Ububanzi esiqwengeni X
ubude roll A
ububanzi roll B
impahla C, %
ubunzima roll V
Ukubekelela ukusuka ekhohlo ukuya ekunene
Beka ukusuka phezulu phantsi
Iindleko ingca 1 roll
umsebenzi 1 roll
Y - Ubude esiqwengeni
X - Ububanzi esiqwengeni
A - ubude roll
B - ububanzi roll
C - Reserve, ichazwa njenge pesenti
V - ubunzima umqulu omnye ngeekhilogram
Khetha nesimbo ulwalathiso kwidispleyi umzobo.
Ukubala iindleko uyakwazi ukukhankanya ixabiso kuluhlu ngalinye kunye neendleko zomsebenzi fakelo.
Yenza icandelo kwi egudileyo kwingca uncedo iiloni zakho ezintle zanamhlanje bekhululekile agugumayo. Le inshorensi herbaceous, nto wathengisa ngayo kwimiqulu iisoyi kunye ayefakwe kuyo imbewu yengca.
Ngokuqhelekileyo, iifem ukuthengisa croquet rolling, nomnikelo uncedo kunye nesimbo yabo. Kodwa ke, ukuba ulwazi oluthile, unako ukwenza umsebenzi ngokwakho.
Inkqubo yethu iya kubala indlela imiqulu ezininzi elinengca kuyimfuneko ukwenzela ukudala indawo enengca cover gingxi ukuze site yakho yonke. Bonke kufuneka ukwazi kuba oko ubungakanani sebali omnye umqulu iisoyi ingca, kwaye ipesenti imfuyo ufuna. Ngolu lwazi, ungenza ngokulula ukubala inani ehloliwe kufuneka wena, yaye iindleko zabo mhlawumbi. Emva koko, nonke nina kufuneka uyenze ukuthenga walala nengca sakho emyezweni okanye ingca ngaphambili.
Landscaping ngezandla zabo - kulula.
Nceda uqaphele ukuba ipesenti imfuyo iya kuba 5 ekhulwini sebali okucingwa 10 kwingingqi kunye iintyantyambo, iintyantyambo kunye umendo egadini.
Phambi kokuqhubeka ukufakelwa ingca, kufuneka alungise site. Ekubeni kuyimfuneko ukususa yonke kobutyobo, amatye, ukususa ukhula. Umhlaba uza kuba ujamelane iikhemikhali ezizodwa nokulungelelanisa. Koko amalungiselelo amanzi. Ekupheleni isigaba samalungiselelo eqongeni phantsi engceni izele kumhlaba otyebileyo, kwiveki phambi kokuba kulindeleke ilele amaqanda. Phambi ngokubekwa ingca, ukuba umhlaba owomileyo kakhulu, kufuneka utyebile.
Ngoku ke ingca kungafakwa isimangalo. Oku kufanele kwenziwe hayi emva kweeyure ezingama-72 ukusuka mzuzu xa nengca uchetyiwe. Okanye, ukuba oku akwenzeki, kufuneka lusasaze kwesoyi kwi yechaphaza nawaphi na amanzi wambi de ufakelo.
Musa songa yaqengqelekela kwezinye ngaphezu 4 zikhabane. Nokuba iiloni elungileyo umthwalo omkhulu kakhulu contraindicated.
Khumbula, kunqweneleka ukubeka nengca ngexesha elinye. Oku kuya kudala yisoma egudileyo iyunifomu.
Elona xesha ngokubekwa isoyi ithathwa ekuqaleni kokwindla okanye umthombo. Kodwa ke kubalulekile ukukhumbula ukuba ibe ilizwe ngeli xesha eyo okanye ezimanzi kakhulu.
Beka bawapheka uqalisa kufutshane kwindawo apho kunzima ukuya evenkileni. Ukubeka nengca kufuneka emgceni. Ukuba kuyimfuneko, yokugubungela kwiziza imilo non-umgangatho, iindawo ezinzima zivaliwe pieces ngokukodwa basinqumla isoyi kumlibo.
inshorensi Umqolo ngamnye kufuneka uqale nokuziphetha ipleyiti ngokupheleleyo, iqhekeza eya kuba ubungakanani elingekho ngaphantsi kwesiqingatha wayo. Iingceba eseleyo wazibeka esiphakathini, kodwa hayi kwi ngingqi.
Emva kokugqiba nengca nganye uthotho oqinileyo. Xa ukuyilwa zokungqinga okanye gongqo kuyimfuneko ukuba uphakamise iisoyi kunye ukugudisa umphezulu ngaphantsi. Ngoko kwakhona ogangathekileyo nengca.
Imikrozo Sabeka lisisiqalo kuthelekiswa kwabanye bricklaying nganye ezifana. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba iipleyiti iisoyi bokuziseta ukucinezwelwa omnye komnye kodwa ayangenana.
Hamba TURF-abasandula wabeka ayikhuthazwa.
Emva kokuba igqityiwe ngokubekwa isoyi, indawo eyimfuneko ukugcwalisa beentanda umxube okhethekileyo. Ukwakhiwa kwale mxube kuxhomekeke kuhlobo lomhlaba onalo kwi sayithi yakho.
Ulozheniju nengca uphoswe kakuhle ngamanzi. On imitha nganye square uya kuthabatha hayi ngaphantsi kweelitha 15. Kwiveki elandelayo kanye ukunkcenkceshelwa ngemini elinengca nayo iyafuneka.
Emva kwenyanga lo iingcambu ingca uya kukhula kunye isiseko apho wayebekwe bawapheka, imbonakalo lengca ziya kuqhuba ixesha elide.
Emva ezimbalwa kweeveki emva ekubekeni zengca kunqunyulwa. Oku kufuneka kwenziwe kwi kolwalathiso nesimbo yayo wabasika kuphela phezulu yabe ingca. ixesha lokugqibela nengca idla bachebe iinwele zabo ngoSeptemba.
Entwasahlobo, emva emhlabeni zinyibilikisiwe, eye kwaye ukuchetywa nengca kwakhona, kodwa kwakhona, ngokunqamla kuphela iincam yabe ingca.
Kwiinyanga ezifudumeleyo, nengca kufuneka ubunamanzi malunga zonke iintsuku ezili-10.
ikhaya Imilinganiselo imiqadi tywe uphahla Abat I-ofaka mansard uphahla hip sixhaso Wood izinyuko ngqo kumtya ngezinyuko ngqo Saddle Ngezinyuko kunye° 90 Ngezinyuko kunye° 90 kunye nezigaba berotary Ngezinyuko kunye 180° ujikelezo Ngezinyuko zijikeleziswe 180° kunye nezigaba berotary Ileli ngemigama ezintathu Ileli ngezipani ezintathu kunye nezigaba berotary ngezinyuko kwamagqabi metal ngezinyuko Metal izinyuko kunye egosogoso wesaphetha Metal ngezinyuko kunye° 90 Metal ngezinyuko kunye° 90 egosogoso wesaphetha Metal ileri 180° ujikelezo Metal ngezinyuko zijikeleziswe 180°, kunye kwisaphetha egosogoso ngezinyuko eziphathekayo umhlube isiseko isiseko pier isiseko esizi amakhonkco eziphathekayo Iizilebhu Indawo eyimfama ukubalwa ezixwesi- Ukwakhiwa eziphathekayo amaplanga izifakelelo iithayile zesiramikhi Isichumisi plasterboard lodongo Ayanda izinto sheet grilles metal ngomthi isakhelo eludongeni Materials Materials kumgangatho Decking Stone Ucingo Fence metal Arch ngenxa ipikethi kocingo imigangatho Self-sokulinganisa Visors ndawo yomhlaba umsele kakuhle umthamo umjelo Turf echibini olubuxande kumbhobho umthamo Umthamo itanki umphanda umthamo Umthamo itanki buxande Isixa lesanti okanye igrabile ezikwimfumba Ubalo lwevolumu yomoya kwi-ventilation greenhouse greenhouse semicircular isakhiwo ababambe Ukukhanyisa kwegumbi impahla calculator mboleko